Izindaba - Uyini umehluko phakathi kukayinki osuselwa emanzini no-inki osuselwa ku-oyili womshini wesithombe?
Uyinki osuselwa ku-oyela ukuhlanza i-pigment emafutheni, njengamafutha amaminerali, uwoyela wemifino, njll. Uyinki unamathela ophakathi ngokungena kukawoyela nokuhwamuka endaweni yokuphrinta; uyinki wamanzi usebenzisa amanzi njengendawo yokuhlakazeka, futhi uyinki endaweni yokuphrinta Umbala unamathiselwe kulowo maphakathi ngokungena kwamanzi nokuhwamuka.
Ama-inki embonini yezithombe ahlukaniswa ngokusetshenziswa kwawo. Zingahlukaniswa zibe yizinhlobo ezimbili: Eyodwa, uyinki osuselwa emanzini, osebenzisa izinyibilikisi ezincibilikiswa ngamanzi njengezinto eziyinhloko ukuncibilikisa isisekelo sombala. Enye ingoyinki osuselwa kuwoyela, osebenzisa izincibilikisi ezingancibiliki amanzi njengengxenye eyinhloko yokuqothula isisekelo sombala. Ngokuya ngokuncibilika kwamakhemikhali awuketshezi, angahlukaniswa futhi abe yizinhlobo ezintathu. Okokuqala, uyinki osuselwa kudayi, osuselwa kudayi, okwamanje usetshenziswa imishini eminingi yezithombe yangaphakathi; okwesibili, uyinki osuselwe kumbala, osuselwe kukayinki osuselwe ku-pigment asetshenziswa kumaphrinta we-inkjet angaphandle. Okwesithathu, uyinki we-eco-solvent, endaweni ethile phakathi, usetshenziselwa imishini yezithombe zangaphandle. Ukunakekelwa okukhethekile kufanele kunikezwe kulezi zinhlobo ezintathu zikayinki akunakuxubeka. Imishini esekwe emanzini ingasebenzisa kuphela ama-inki asuselwa emanzini, futhi imishini esekwe ku-oyili ingasebenzisa kuphela ama-inks we-solvent solnt kanye nama-inks we-solvent. Ngoba ama-cartridges oyinki, amapayipi, nemibhobho yemishini esuselwa emanzini nayiwoyela yehlukile lapho umshini ufakwa, ngakho-ke, uyinki awunakusetshenziswa ngokungakhethi.
Kunezici ezinhlanu eziyinhloko ezithinta ikhwalithi ye-inki: ukusabalalisa, ukuqhuba, inani le-PH, ukungezwani kwendawo, kanye ne-viscosity.
1) Okuhlakazekile: Kuyinto esebenzayo esebenzayo, umsebenzi wayo ukuthuthukisa izakhiwo zomzimba wenkino, nokwenza ngcono ukusondelana nokumanzana koyinki nesipanji. Ngakho-ke, uyinki ogcinwe futhi owenziwe ngesipanji ngokuvamile uqukethe okokuhlanza.
2) Ukusebenza: Leli nani lisetshenziselwa ukubonisa izinga lokuqukethwe kukasawoti. Ngama-inki wekhwalithi engcono, okuqukethwe kasawoti akufanele kudlule u-0.5% ukugwema ukwakheka kwamakristalu embhobho. Uyinki osuselwa ku-oyela unquma ukuthi imuphi umlomo ongawusebenzisa ngokuya ngosayizi wezinhlayiya zombala. Amaphrinta amakhulu we-inkjet 15pl, 35pl, njll. Anquma ukunemba kwephrinta ye-inkjet ngokosayizi wezinhlayiyana. Lokhu kubaluleke kakhulu.
3) Inani le-PH: libhekisela kunani le-pH loketshezi. Isixazululo esisebenza kakhulu, lehla inani le-PH. Ngakolunye uhlangothi, isixazululo se-alkaline, siyanda inani le-PH. Ukuze uvimbele uyinki ekonakaliseni umbhobho, inani le-PH kufanele libe phakathi kuka-7-12.
4) Ukungezwani kobuso: Kungathinta ukuthi uyinki ungakha yini amaconsi. Uyinki wekhwalithi engcono une-viscosity ephansi kanye nokuqina okuphezulu kwendawo.
5) I-viscosity: Ukumelana noketshezi ukugeleza. Uma i-viscosity ye-inki inkulu kakhulu, izophazamisa ukunikezwa kukayinki ngesikhathi sokunyathelisa; uma i-viscosity incane kakhulu, ikhanda likayinki lizogeleza ngesikhathi senqubo yokuphrinta. Uyinki ungagcinwa izinyanga ezi-3-6 ezingeni lokushisa elijwayelekile lekamelo. Uma yinde kakhulu noma izodala imvula, izothinta ukusetshenziswa noma ukuxhuma. Isitoreji sikayinki kufanele sivalwe ukugwema ilanga eliqondile. Izinga lokushisa akumele libe phezulu kakhulu noma phansi kakhulu.
Inkampani yethu ithumela ngaphandle ama-inki amaningi angaphakathi nangaphandle, njenge-ink kuphela ye-eco, i-ink kuphela, i-sublimation ink, i-pigment ink futhi inezinqolobane zendawo ezingaphezu kuka-50 phesheya. Singakunikeza okudlekayo nganoma yisiphi isikhathi ukuqinisekisa umsebenzi ongenaziphazamiso. Xhumana nathi ukuthola amanani akho wendawo.